4D ပရင်တာများ။ သူတို့ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲ။ | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
3D printer တွေအကြောင်းမင်းကြားဖူးမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် 4D ကော။ နည်းပညာတိုးတက်မှုများသည်ခုန်ကျော်လွှားမှုများနှင့်တိုးတက်လာခြင်းနှင့်ဤကိစ္စတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမှတ်မှုသည်လျော့နည်းသွားမည်မဟုတ်ပါ။ 4D ပုံနှိပ်ခြင်းကသင့်အားallရိယာအားလုံးနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့်ကိန်းဂဏန်းအမျိုးမျိုးကိုပုံနှိပ်ထုတ်ပေးသည်။ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်၊ ကြည့်ကြရအောင် 4D ပရင်တာတွေဘာတွေလဲ၊.
ကမ္ဘာကြီး 3D ပရင်တာ ၎င်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတစ်ခုထက်မကသောအံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သူတို့ဟာစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းကိန်းဂဏန်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစိတ်ကူးကြည့်လို့မရဘူး။
အရာအားလုံးပြောင်းလဲနေသည်နှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန်မြေပြင်အနေအထားဆီသို့ ဦး တည်စှဲ။ အမှန်မှာ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းတွင်တိုးတက်ရန်များစွာကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည် အများကြီးတိုးတက်လာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည် ဒီနည်းပညာကိုကြည့်ဖို့။ သို့သော် ပုံနှိပ် 4D ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံနှိပ်ခြင်းလောကမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်ပြီးချိုချင်အောင်လုပ်ပြီးသတိထားမိချင်တယ်။
1 4D ပရင်တာဘာတွေလဲ။
2 4D ပုံနှိပ်ခြင်း application များ
3 4D ပရင်တာများကအသုံးပြုပစ္စည်းများ
4 3D နှင့် 4D ပရင်တာများအကြားခြားနားချက်များ
5 4D ပုံနှိပ်ခြင်း၊
4D ပရင်တာများသည် 3D ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံနှိပ်ခြင်း၏အယူအဆကိုသူတို့က ပို၍ ယူကြသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထိနိုင်သည့်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ပုံနှိပ်သောပရင်တာတစ်ခုသာမကဘဲ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောပုံစံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများရောနှောနိုင်သည်။
တနည်းအားဖြင့် 4D ပုံနှိပ်ခြင်းကခွင့်ပြုပါတယ် သူတို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်းအရာဝတ္ထုသည်ဥပမာအားဖြင့်ပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျိုးပဲ့ခြင်းဖြစ်လျှင်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ဒီနည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့ 3D ပရင်တာတွေနဲ့အရင်ကထက်ကျော်လွန်ပြီးအဆင့်တစ်ခုယူဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာပါ။ 4D ပုံနှိပ်စက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းတို့ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်သည် သိပ္ပံနှင့်ကျန်းမာရေး, လူအများတို့၏ဘဝကိုတိုးတက်စေမည့်ကိရိယာများဖန်တီးရန် ဦး ဆောင်နေသည်။
4D ပုံနှိပ်ခြင်း application များ
တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဖြစ်သောကြောင့် 4D ပုံနှိပ်ခြင်း၏အမှန်တကယ်အသုံးချပရိုဂရမ်များအကြောင်းပြောဆိုရန်စောလွန်းသေးသည်။ ထို့ကြောင့်သုတေသီများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များသည်ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနည်းပညာကိုလေ့လာနေကြသည်။
သို့သော်လည်းအရာဝတ္ထုများကို 4D ပရင်တာများဖြင့်အမျိုးမျိုးဖန်တီးပြီးဖြစ်သည် ရှေ့ပြေးပုံစံများ။ ကျနော်တို့အကောင့်ထဲသို့ယူပြီးဖန်တီးခဲ့ကြသောရှေ့ပြေးပုံစံတစ်ခုခွဲခြားလုပ်သင့်ပါတယ် ဘယ်လယ်ပြင်၌သူတို့လျှောက်ထားလိမ့်မယ်။ နောက်ကြည့်ရအောင်
ပုံနှိပ် 4D အုတ် ပုံသဏ္changeာန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီးနံရံများကိုပြုပြင်နိုင်သည်။
ဖန်တီးမှုကိုခွင့်ပြုသည် အခြေခံအဆောက်အအုံမျက်နှာကျက်နှင့် / သို့မဟုတ်နံရံများ 4D ပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဝန်းရံနေသောပတ်ဝန်းကျင် (နေ့နှင့်ည၊ အအေးနှင့်အပူ) နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏အတွင်းပိုင်းအခြေအနေများပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပုံနှိပ် ပရိုတင်း တိကျတဲ့လှုံ့ဆော်မှုများ၏မျက်နှာကိုမှာသူတို့ရဲ့ပုံသဏ္ifyာန်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဤနည်းပညာဖြင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုအတုလုပ်နိုင်သည်ဟုပြောဆိုမှုများရှိသည်။
၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဟာ့ဒ်ဝဲဒြပ်စင် သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္modာန်ကိုပြုပြင်နိုင်သည်။
ပုံစံ အဝတ်အစား y ဖိနပ် 4D ပုံနှိပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ပုံသဏ္changeာန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့်အပြင်ရာသီဥတုသို့မဟုတ်အခြေအနေကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည် (အကယ်၍ လူကလေ့ကျင့်ပါကအထည်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ (ဥပမာ - elasticity) ကိုလိုက်ဖက်သည်)
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပစ္စည်းများ 4D ပုံနှိပ်ခြင်း ထုပ်ပိုး, ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေထိုင်နိုင်ပြီးရေ၊ စိုထိုင်းဆနှင့်အပူချိန်စသောအချို့သောရာသီဥတုအခြေအနေများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဤနည်းပညာသည်သုတေသန၊ ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်တွင်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင်ရှိပြီးဖြစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုစတင်ပြောဆိုရန်စောလွန်းသေးသည်။ ဒါဟာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စတင်နေသည် ဤအပရင်တာနှင့်အတူရှေ့ပြေးပုံစံဒီဇိုင်း။
ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ ဖိုင်ဘာကွန်ယက်, အရာအဆင်ပြေအောင်နှင့်ပရိုဂရမ်နိုင်ပါသည်နှင့်ပစ္စည်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်၎င်း၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်။ ကွဲပြားခြားနားသောမူကွဲရှိသည်။
အသုံးများသောပစ္စည်းများမှာ - ရေဓာတ်များသောပိုလီမာများ (သူတို့သည်ရေထိတွေ့မှုကိုတုံ့ပြန်သည်), thermo -active ပိုလီမာ (သူတို့ကအလင်းနှင့်အဆက်အသွယ်တုံ့ပြန်ကြသည်), မှတ်ဉာဏ်ဒီဂျစ်တယ်ပိုလီမာပုံဖော် (သင်ပြောင်းလဲပြီး၎င်းတို့၏မူလပုံသဏ္ဌာန်သို့ပြန်သွားနိုင်သောအရာများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်) နှင့် cellulose ဒြပ်ပေါင်းများ (သူတို့အပူချိန်နှင့် / သို့မဟုတ်စိုထိုင်းဆကိုတုံ့ပြန်) ။
4D ပုံနှိပ်ခြင်းတွင်လည်းခေါ်သောပစ္စည်းကိုတွေ့ရသည် LCE (အရည် Crystalline Elastomers), ဒါမှမဟုတ်တူညီတဲ့, အရည်ကြည်လင် elastomers ကဘာလဲ။ ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှင်မြန်ပြီးပြောင်းပြန်ပြောင်းနိုင်သောအပြောင်းအလဲများကိုခွင့်ပြုသည် (programming လိုအပ်သည်) ။
3D နှင့် 4D ပရင်တာများအကြားခြားနားချက်များ
3D ပုံနှိပ်ခြင်းသည် အရာဝတ္ထုများ၏ထို့အပြင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုလိုသည်မှာ 3D ပရင်တာများခွင့်ပြုသည် အလွှာများစွာမှရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများသို့ဒစ်ဂျစ်တယ်လေယာဉ်များပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် 4D ပုံနှိပ်ခြင်းသည်ဤနည်းပညာကိုအခြေခံသည်၊ အမှန်တရားမှာဤကိစ္စတွင် 3D ပုံနှိပ်ခြင်း၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုပြောင်းလဲစေရန်အခြေခံအားဖြင့်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲထားသောအထူးပစ္စည်းများနှင့်ခေတ်မီဆန်းပြားသောဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။
တိုတောင်းခုနှစ်, 4D ပုံနှိပ်ခြင်း 3D ပုံနှိပ်ခြင်း၏သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းသည်တစ်ချိန်ကတည်ဆောက်ခဲ့သောအရာဝတ္ထုများကိုဖန်တီးသည် သူတို့မပြောင်းလဲနိုင်ဘူး။ သို့သော် 4D ပုံနှိပ်ခြင်းတွင်၎င်းတို့သည်အရာဝတ္ထုများ၏အရည်အသွေးကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုသည် ပွောငျးလဲခွငျး ကတည်းကပတ်ဝန်းကျင်၏အခြေအနေများအရသိရသည် သူတို့ကအထူးပစ္စည်းများနှင့်လုပ်နေကြသည်။
နှင့် 4D ပုံနှိပ်ခြင်း, ငါတို့သိတဲ့ပုံနှိပ်ခြင်းသဘောတရားကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ။ အရာဝတ္ထုတွေကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့ပြောနေတယ် အချို့သောပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေများ (အလင်း၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ အအေး၊ အပူစသည်တို့) နှင့်ထိတွေ့သည့်အခါတိုင်းအခြားပုံစံများနှင့် mutating ၏အရည်အသွေးကို။
၎င်းသည်တုန့်ပြန်သောပစ္စည်းများအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည် ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှု (ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည်) ထိုကဲ့သို့သောအပူ, kinetic, မြေထုဆွဲအား, သံလိုက်အဖြစ် နှင့်များစွာသောပိုပြီးအမျိုးအစားများ။
ဒီနေ့ထိငါတို့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောနိုင်ပါတယ် 4D တွင်အကန့်အသတ်မရှိရှိပြီးစူးစမ်းလေ့လာစရာများစွာရှိနေသေးသည် ဒီနည်းပညာ၏။ 4D ပရင်တာများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံနှိပ်ခြင်းလောကတွင်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်စစ်မှန်သောအရာဝတ္ထုများကို ဖန်တီး၍ အမှတ်အသားပြုလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လဲ tutorial » 4D ပရင်တာများ။ သူတို့ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ။